I-Zencastr: Qopha kalula izingxoxo zakho zePodcast ku-inthanethi | Martech Zone
I-Zencastr: Qopha kalula izingxoxo zakho zePodcast ku-inthanethi
NgoLwesine, ngoMashi 2, 2017 NgoLwesihlanu, Mashi 3, 2017 Douglas Karr
Umngani nomphathi wokudala wakho konke okuyi-podcasting nguJen Edds kusuka Inkampani Yokusakaza I-Brassy. Angimtholi ngimbone kaningi, kepha uma ngimbona kuhlale kuhlekwa kakhulu. UJen ungumuntu onethalente elilodwa - uyahlekisa, ungumculi onethalente futhi ungumculi, futhi ungomunye wabadlali be-podcast abanolwazi kakhulu engibaziyo. Ngakho-ke, akumangazanga lapho ehlanganyela nami ithuluzi elisha elingaba nentshisekelo kini bantu - I-Zencastr.
Uma ungumakadebona wepodcaster, maningi amathuba okuthi une ibhodi lokuxuba kanye neqoqo elikhulu lamamakrofoni namahedfoni. Uma uyi-podcaster entsha, ungahle ube ne- mixer yedijithali. Ubunzima buqala lapho ufuna ukuletha izivakashi ezikude. Sigqokise okwethu Isitudiyo se-Indianapolis podcast nge-Mac Mini nangezindlela zokuxhumana zomsindo ezimbalwa ze-USB zokukhipha i-Skype noma omunye umsindo kumxube wethu.
Ngenkathi lokho kuxazulula ubuchwepheshe, kuzofanela uthinte i-mixer yakho noma uhlele i-mixer yakho yedijithali ukukhipha abantu bakho be-in-studio ebhasini oya kubantu bakho abaku-inthanethi. Futhi kufanele uqinisekise ukuthi ungaliphindi izwi lesivakashi sakho ngenye indlela, izivakashi zakho eziku-inthanethi zizokuzwa ukunanela. Awunazo lezo zinkinga kuphela, kepha izinhlelo eziningi zokuxhumana online (njengeSkype) bese wehlisa umsindo. Kufana nokuzwa umuntu eshaya isiteshi somsakazo efonini yakhe.
Ngabe ukuthole konke lokho? Yebo… bekukhathaza kakhulu kwesinye isikhathi. Ngisebenze nabendawo unjiniyela womsindo uBrad Shoemaker nonjiniyela beBehringer ukuze konke kusebenze kahle futhi sizame inqwaba yamapulatifomu womsindo wokuqopha okuku-inthanethi okucocekile.
Vele, awudingi noma yikuphi kwalokhu kusuka I-Zencastr ulapha! Ngenkathi kunamanye amapulatifomu aku-inthanethi wokuqopha - njengeBlogTalkRadio (sishiye ngoba asikwazanga ukurekhoda umsindo wekhwalithi online), iZencastr inikeza ukuqoshwa kwekhwalithi ephezulu futhi yakhelwe i-podcast engaba nezivakashi eziningana ezivela ezindaweni ezahlukahlukene.
IZencastr ifana nokuba nerekhoda emafwini, futhi inamandla okuxuba anqunyelwe:
Ithrekhi Ehlukile Ngesivakashi ngasinye - IZencastr iqopha izwi ngalinye endaweni ngekhwalithi eyimfihlo. Akusekho ukuphuma ngenxa yokuxhumeka okungalungile. Azisekho izinguquko kwikhwalithi phakathi kombukiso. Akukho lutho ngaphandle komsindo ocacile we-crystal.
Qopha ku-WAV Engalahleki - Ungayekethisi ngekhwalithi. IZencastr iqopha izivakashi zakho nge-16-bit 44.1k ye-WAV engalahleki ukuze uthole umsindo ongcono kakhulu ongasebenza nawo.
I-Soundboard Yokuhlela Okubukhoma - Faka isingeniso sakho, isikhangiso, noma omunye umsindo bukhoma njengoba urekhoda. Lokhu konga isikhathi esithathayo ukuhlela lokhu ngesikhathi sokukhiqiza kabusha.
I-VoIP eyakhelwe ngaphakathi (Voice over IP) - Akunasidingo sokusebenzisa insiza evela eceleni efana ne-Skype noma i-Hangouts. Ungaxoxa ngezwi nezivakashi zakho ngqo ngeZencastr.
Ukukhiqizwa Okuzenzakalelayo - Khiqiza ithrekhi eyodwa exubile enezithuthukisi zomsindo ezikhethiwe ezisetshenzisiwe ukwenza ukurekhoda kwakho kube yimiksi yobungcweti elungele ukushicilelwa.
Ukuhlanganiswa kwe-Cloud Drayivu - Ukurekhodwa kwakho kulethwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho yeDropbox ngokuhlela okulula nokwabelana. I-Google Drayivu iyeza maduze.
Sawubona… futhi uma usaqala, uJen ubeke inkambo ephelele ukuqala i-podcast yakho lokho kumele!
I-Brass Broad's Brass Tacks Pod-Class
Tags: behringermixer yedijithalimixeri-podcastingzencastr
I-Ecrebo: Ukwenza i-POS yakho ibe ngeyakho
Kuyini Ukukhangisa Kwabantu Bomdabu?